Amalungu Amasha Welcome
× Siyakwamukela ku iforamu yethu!
Sitshele kanye namalungu ethu ukuthi ungubani wena, yini oyithandayo futhi kungani waba ilungu Rikoooo.
Samukela wonke amalungu amasha futhi ngiyethemba ukukubona azungeze eziningi!
Umbuzo Iziqhingi zaseCanary.
unyaka 1 4 edlule #1239 by Josmor
Ngisanda kulandwa i-Canary Islands software 1 ne-2. Kodwa ngiyahlola ukuthi imiphumela ekhonjisiwe kuvidiyo kuphela isebenza ne-REX 2.0. Ngiphenya i-intanethi, futhi angiyitholanga. Ngingayithola kanjani imiphumela emihle ye-Canary Islands?
Ngiyabonga wathola: 48
unyaka 1 4 edlule #1240 by Dariussssss
Sawubona futhi wamukelekile ku-Rikoooo.
Le indawo ayilungile kancane ukuthumela izinkinga onazo nge-sim yakho. Sicela uthumele le nkinga ngaphansi kwesihloko esithile sayo, noma ngabe yiyo FSX or P3D.
Sizokwenza konke esingakwenza ukuze sikusize.
Isikhathi ukudala page: 0.237 imizuzwana